के कोरोना संक्रमित आमाबाट जन्मिएको बच्चा सुरक्षित हुनसक्छ ? - Birgunj Sanjalके कोरोना संक्रमित आमाबाट जन्मिएको बच्चा सुरक्षित हुनसक्छ ? - Birgunj Sanjalके कोरोना संक्रमित आमाबाट जन्मिएको बच्चा सुरक्षित हुनसक्छ ? - Birgunj Sanjal
२१ चैत्र २०७६, शुक्रबार २१:४४
म्याड्रिड | भर्खरै आमा बनेकी एक महिलालाई आफ्नै नवजात शिशुलाई १० दिनसम्म छुन दिइएन ।
कारण, ती महिलालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण थियो । उनको नवजात छोरालाई पनि संक्रमण सर्ने त्रासले उनलाई टाढै राखियो । हाल उनीहरुको पुनर्मिलन भए पनि न आमाले न त उनका पतिले नै नवजात शिशुलाई छुन पाएका छन् ।
उनीहरु क्वारेन्टाइनमा राखिएकाले पनि आफ्नै शिशुलाई छुन समेत पाएका छैनन् । ‘यो कठिन छ,’ भनेसा मुरो म्याड्रिडस्थित आफ्नै निवासबाट भनिन् । जुन कोरोनाबाट अति प्रभावित भएको ठाउँमध्ये एक हो ।
स्पेनमा मात्रै हालसम्म कोरोनाका कारण १० हजार भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ । इटालीपछि युरोपमा धेरै संक्रमित भएको देश स्पेन नै हो । ‘उसले तपाईँलाई समात्न खोज्छ, तर सक्दैन,’ निराश हुँदै ३४ वर्षीया महिला भन्छिन् ।
उनी मार्च १६ मा ‘सिजरियन सेक्सन’बाट बच्चा जन्माउने तयारीमा थिइन् । जब उनका हजुरआमालाई कोरोना भाइरसले समात्यो सबै चिज बदलियो । हजुरआमाको पनि मृत्यु पनि भइसक्यो । मार्च १२ मा उनी र उनका पतिलाई कोरोना संक्रमण भएको थियो ।
उनी सम्पूर्ण मिश्रित अनुभव भएको सम्झन्छिन् । र जुन डरलाग्दो थियो । खास त बच्चालाई नै संक्रमण हुने हो कि भन्ने डरले उनलाई सतायो । पतिमार्फत संक्रमण सर्ला कि भन्ने डर पनि थियो ।
घर फर्किएपछि उनका पति पनि संक्रमणसँग संघर्षरत थिए । पतिलाई उनको ‘सर्जरी’ भएको छ भन्ने त थाहा थियो तर ठ्याक्कै के भइराखेको छ थाहा थिएन । ‘यो मेरो जीवनकै सबैभन्दा लामो ९० मिनेट थियो,’ ओस्कार कारिल्लो भन्छन् ।
अन्ततः शिशु ओलिबर सुरक्षित रुपमै जन्मियो । जसको तौल ३.६ केजी थियो । तर उनलाई जन्मिना अन्य शिशुबाट टाढा ‘इन्क्युबेटर’मा राखियो । कम्तिमा परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट नआउन्जेलसम्मका लागि ।
४८ घण्टाको उपचारपछि अस्पतालमा शिशुको लागि पनि आइसोलेसन जस्तै थियो । अस्पतालका स्टाफ समेत न्युन सुरक्षा उपकरणका कारण थोरै मात्र भित्र छिर्थे । मुरो घर गए । तर नवजात शिशुलाई लैजान पाएनन् ।
१० दिनपछि भने भर्खरै आमा र बाबु बनेको यो जोडीले मास्क र पन्जा लगाएर आफ्नो बच्चालाई घर लैजान पाउने भए । ‘ए फुच्चे च्याम्पियन, हामी अहिले घर जाँदैछौँ,’ मुरोको मुखबाट आफ्नो छोराका लागि पहिलो वाक्य निस्कियो । यस्तो लाग्थ्यो कि, उ आजै जन्मिए जस्तो देखिन्थ्यो ।
अस्पतालका साइकोलोजिस्ट अरंत्सा फर्नान्डेजका अनुसार यो ज्यादै विशेष क्षण थियो । ‘मेरो व्यवसायीक करिअरको जीवनमै सबैभन्दा सुन्दर अनुभव देखेँ मैले,’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासामु भनिन् ।
आमाले झै आफ्नो शिशुलाई पन्जाविनाको हातले छुन पाएकी छैनन् । ‘हामी क्वारेन्टाइनको अन्त्यका लागि आतुर थियौँ, किनकि, हामी उसलाई छुन र किस गर्न पाउँदै थियौँ,’ कारिल्लोले भने । सम्भवतः कोरोना संक्रमति आमाबाट जन्मिएको सन्तान यसरी सुरक्षित भएको यो पहिलो घटना हुनसक्छ ।